SOOMAALIYA UUN BAA IN AY DOWLAD NOQOTO LA DIIDAYAA – Balcad.com Teyteyleey
SOOMAALIYA UUN BAA IN AY DOWLAD NOQOTO LA DIIDAYAA
Maalin dhowayd waxan maqaaxi Nairobi ku taal ka wada qadeynay Xil. Ilyaas Barre Shiil. Waa xildhibaan Somali-Kenyan ah oo la wada garanayo. Maqaaxida ayuu keligii inoogu soo galay, inta uu ina salaamay buuna kursi halkeer ah ku fariistay, dabadeedna qado dalbaday, taleefanna dhegaha gashaday. Markii aannu kala tegaynay, waxan kula kaftamay: “Xildhibaanka kula midka ah ee Muqdisho jooga afar Askari oo hubaysan iyo Gaari aanay xabbaddu karin la’aantood Maqaaxi tan la mid ah ma uu fariisan karo”.
Isla maalintaas, goor Casarkii ah baan xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Eastleigh tegay. Aniga oo Masjidka Al-Hidaaya ag-maraya ayaa waxa iga hor yimid Muftiga Koox Diimeedka Al-Shabaab, Sheekh Xassaan oo keligiis lugeynaya.
Waxan keligey iskula hadlay: Labadaas nin haddii ay Soomaaliya joogi lahaayeen, midba kan kale waa uu iska ilaalin lahaa, oo Ilyaas wuxuu dhihi lahaa, “argagixisada ha la soo qabto oo ha la toogto”, Xassaanna waxa uu dhihi lahaa, “Gaalka ha la’isku qarxiyo oo ha lagu Janna tago”.
Waxan isweydiiyay: “Nairobi Xildhibaanka joogaa ma Kacbadii ayuu ku jiraa, Sheekha Shabaabka ahe joogaase ma gurigii Abuu-Sufyaan buu ku jiraa? Maxaa Muqdisho marka la joogo dhiiggooda isu banneeyay, Nairobina ay taxaddar la’aan isu dhinac yaacayaan? Maxaa carruurta iyo haweenka Muqdisho jooga loo xasuuqayaa oo labadii meel isugu timaadaba bam loo dhex dhigayaa?
Nairobi Soomaalida joogta oo labadaas mudane ee aan soo sheegay ay ugu horreyaani waa wada walaalo wada nool oo wada ganacsada, wada qadeeya, isuna yimaada oo isla qosla. Waxan anigu garanayaa nin aan qaraabo nahay oo kolka aannu Nairobi wada joogno walaalkay ah, haddiise Xamar la tago, aragti igu tooganaya oo aan ka dhuumanayo.
Waxa iisoo baxday jawaab daah-furan oo dabka ka cad: Cid isdiiddan iyo cid dagaashani ma jirto, cid Gaal ah iyo cid Muslin ahina ma jirto. Hase yeeshee Soomaaliya ayaa in ay degto oo dowlad noqoto la diidayaa. Dadka Soomaaliya ku nool ayaa in nolol iyo horumar loo diido qandaraasyo loo soo qaatay. Dadka in dalkooda laga barakiciyo oo gebi ahaanba dibaddaha la aado, dalkana duul kale dego ayaa la doonayaa. Ubadku in ay dibbadaha ku dhashaan oo ay ku dhalaan, dabadeedna Diin iyo diir beddelmaan baa la doonayaa. Dad Soomaali 100% Muslin ah baa la diidayaa. Badda iyo dhulka dihan iyo kheyraadka dalka daadsan baa la doonayaa.
Wasiirka arrimaha gudaha oo shaqo joojin ku sameeyay xoghayaha joogtada Wasaaradaasi (Akhriso)